Ringkekọrịta ezughi oke - Ihe kpatara You Ji Chọrọ Achọpụta Ọdịnaya Ọdịnaya | Martech Zone
Wednesday, October 17, 2018 Wednesday, October 17, 2018 Sarah Williams
O nwere mgbe ọ bụrụ na ị wuo ya, ha ga-abịa. Mana nke ahụ bụ ihe niile tupu ịntanetị juputara na ọdịnaya na ọtụtụ mkpọtụ. Ọ bụrụ n’inwe nkụda mmụọ na ọdịnaya gị anaghị agazi na mbụ, ọ bụghị gị kpatara ya. Ihe gbanwere.
Taa, ọ bụrụ na ị na-echebara ndị na-ege gị ntị na azụmaahịa gị anya, ị ga-enwerịrị usoro iji bulie ọdịnaya gị gaa na ndị chọrọ ya nke ukwuu - site na usoro nchịkọta ọdịnaya.
Kedu ihe kpatara oke okwu banyere ọdịnaya?
Onye ọ bụla na nkịta ha maara etu ederede dị mkpa na ọdịnaya anya nọ na ahịa. Ọ bụ ụgbọ ala bụ isi nke na-ebugara ndị na-ege gị ntị ozi gị, ọ bụ okwu, onyonyo na vidiyo na -emepụta mmetụta ma na-akpali ndị mmadụ ime ihe. Na Omume na-abịa Mgbanwe, ọ highestụ kachasị elu nke azụmaahịa ọ bụla.
Ihe niile ị tinyere ebe ahụ, n'agbanyeghị agbanyela ọwa [blog posts, akụkọ Instagram, akwụkwọ akụkọ, vidiyo, wdg.] N'ihu ndị na-ege gị ntị na-enyere gị aka ime ka ha nwee mmasị na itinye aka na akara gị. Ọ na - enyere gị aka itinyekwu uche na azụmaahịa gị yana oge niile gbasaa ndị na-ege gị ntị dịka onye na - ede blọgụ.
Yabụ, ịmepụta ọdịnaya dị mma, ibipụta ya na nyiwe dị iche iche dịkwa mma, mana ikwesiri ịkọba ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ rute ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị mmadụ.
Ndị a bụ usoro dị ike iji wuo usoro amplification gị:
Akwụ ụgwọ mgbasa ozi - Chee echiche banyere mgbasa ozi dịka nku ndị a na-adịghị ahụ anya nke na-ebu ọdịnaya gị ogologo. Ọtụtụ nyiwe, ụbọchị ndị a, aghọwo kwuo ugwo usoro, karịsịa Facebook. Onweghị ihe dị njọ ebe a, ha bụ azụmaahịa, yabụ gị. Ọ bụrụ n’inwere ike itinye $ 1 wee weghachite $ 2, ị gaghị achọ igwu egwu? Kwụ ụgwọ maka mgbasa ozi abụghị naanị maka naanị ebumnuche na-akpali ọdịnaya gị n'ihu ndị na-ege gị ntị. Ọ dịkwa mma maka ịpị ndị ọhụụ ọhụụ na ịgbasa iru gị, karịrị mmetụta nke aka gị.
Kwuo ụdị ndị ọzọ na ndị na-eme ihe ike - Ebumnuche ebe a bụ iwulite mmekọrịta na ezi uche na ndị ọgbọ na niche gị site na ịkekọrịta ụfọdụ ọdịnaya ha ma ọ bụ kpado ha mgbe ọ bụla enwere ike. Nke a ga - etinye gị na rada ha ma mee ka ha nwee ike ịkwụghachi ụgwọ mgbe oge ruru.
Jụọ ndị na-eme ihe ka ha banye n'ime - Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji banye n'ime ndị na-ege ntị na-emetụta ya bụ ịjụ ha maka ntinye ha na isiokwu ụfọdụ. Kama ịnwa ịme ka bipụtara akwụkwọ ọbịa gị n'elu ikpo okwu ha ma ọ bụ iji kwenye ha ka ha kerịta ụfọdụ ọdịnaya gị na ndị na-ege ha ntị, ịnwere ike izipu ha ozi na-arịọ maka echiche ha banyere isiokwu dị na niche gị. Nke a ga - ewe obere oge na njedebe ha ma yikarịrị ka ọ ga - eme ka ndị na - ege gị ntị kerịta ọdịnaya gị niile. Ma ga - enyere gị aka ịme mmekọrịta na ezi uche n’ụzọ ziri ezi. Ọzọkwa, gbalịa iji ụzọ iche echiche nke gị iji nweta ihe dị adị, ọ bụghị nke mmetụta uche na-egosipụta banyere ngwaahịa gị.
jiri skyscraper usoro! - Na nkenke, nke a bụ ụzọ isi ewu ụlọ n’elu ọdịnaya bara uru dị ugbu a. N'ụzọ bụ isi, ị na-eme nnyocha sara mbara na otu isiokwu, chịkọta ọtụtụ data dịka ị nwere ike wee tinye mgbakwunye nke gị na isiokwu ahụ ma kesaa echiche gị pụrụ iche na mkparịta ụka ahụ dum. Mgbe ịmechara, zipụ ọdịnaya ahụ na ndị ọzọ na-emepụta ọdịnaya ndị a kpọtụrụ aha na ọrụ gị ma jụọ maka nzaghachi ha na ịkekọrịta ha na ndị na-ege ha ntị.
Weghachi ọdịnaya gị - Nwere ibu nke blọọgụ bara uru bara uru na saịtị gị? Nye ha mmalite ọhụụ site na ijikọ ndu ndu mgbe niile na iji ọdịnaya gị kacha mma. Jirizie ya dị ka magnet ọgbọ na-eduga maka nlezianya anya na ịmara mmata. Nke a ga - enyere gị aka iwere ọdịnaya dị ugbu a were gị oge na akụrụngwa iji mepụta ma banye ndị ọhụụ ọhụrụ.
Na-agbanye ederede blọọgụ na ntanetị mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-ekwu okwu
Mepụta obere vidiyo site na iji ngwaọrụ dịka Lumen 5 or Inshot ịkọrọ ụfọdụ ngwa ngwa Atụmatụ
Inweta ọdịyo sitere na ọdịnaya vidiyo gị ma gbanwee ya na pọdkastị
Na ngwụcha, ịkwesịrị ịhazi nke ọma yana imepụta ma leverage gị ọdịnaya. Nke a pụtara na ị ghaghi iche echiche nke ọma ma bulie ọdịnaya gị kacha mma n'ihu ndị nwere ike ịchọrọ ya. Isi ihe dị ebe a bụ mkpa.
Ọ dịghị ihe dị mwute karịa ịmepụta ọdịnaya bara uru nke ukwuu wee wụsa ya na ndị na-ege ntị na-ezighi ezi. Kwe ka usoro a duzie usoro okike gị na usoro nhazi.
Gbaa mbọ hụ na ị ghọtara nsogbu ndị na-ege gị ntị nke ọma yana ị dozikwara azịza gị. Mgbe ahụ, attentionaa ntị na ebe uche nke ndị na-ege gị ntị na-aga. Wee tinye n'ime nyiwe ndị ahụ site na iji ọdịnaya dị mkpa etinyere na ebumnuche azụmahịa gị na ebumnuche gị.
Kedu ka ị si emepụta ma kwalite ọdịnaya gị ugbu a? Kedu n'ime usoro mgbasawanye ndị a ị ga-achọ ibu ụzọ nwaa? Ka anyị mara echiche gị na-aza ajụjụ n'okpuru!
Tags: ụdịmmekotammụba ọdịnayaweghachite ọdịnayaNdị na-emerụ ahụakwụ ụgwọ mgbasa ozikwuo ugworepurposeweghachite ọdịnayaUsoro skyscraper
Sarah Williams bụ onye ọchụnta ego dabeere na Berlin, na-ere ahịa ọkachamara na nkwukọrịta n'ịntanetị. Chọpụta ọkacha mmasị ya dijitalụ ịmalite - Magazin Wingman - akwụkwọ ntanetị nke ndụ n'ịntanetị maka ụmụ nwoke.
Mgbanwe Dijitalụ bụ Okwu Ọchịchị, Ọ bụghị Okwu Teknụzụ